दैनिक जीवनमा Appearance- भूमिका र महत्त्व
रूप ... हामी यो अवधारणा सामना गर्दै जीवनमा कति। कहिलेकाहीं हामी एक स्मृति आफ्नो मनपर्ने पेशा बिना काम वा surrendering मा सर को बल plunging, कुनै महत्त्व यस महत्त्वपूर्ण कारक ध्यान छैन।
र तरिका द्वारा, कि उपस्थिति एक व्यक्तिको चरित्र केही पक्षहरू र सुविधाहरू वर्णन सक्छ। तपाईं एक पूर्ण अनुपयुक्त तरिका केही संस्थाले मा देखाए र मुख मा फोमिंग सम्पूर्ण "ध्यान र आफ्नो मनसाय गम्भीरता," आफ्नो प्रभाव आफ्नो कुरुप दृश्य उपस्थिति द्वारा उत्पादित गर्न पूर्ण भुलक्कड सुरक्षा भन्न गरौं। बिरामी-छलफल उपस्थिति आफ्नो शानदार विचारै, पूर्णता पछि लाग्नुलाई र संसारको ज्ञान आसपास घोर गलतफहमीले समावेश छ।
तर, भरोसा कमाएका छन् र जीवनमा राम्रो काम गर्ने मान्छे, वास्तविक प्रतिभावानबाट सामाजिक मान्यता पनि खारेज गर्न सक्षम छन्: त्यसपछि, तिनीहरूले प्रतिभावानबाट छन्! उदाहरणको रूपमा म दिन सक्छ ठूलो गणितज्ञ आइन्स्टाइन, विकास गर्न अमूल्य योगदान गरे जो सही विज्ञान को। उहाँले अनिवार्य भएको सांसारिक दल बाहिर उभिरहेका, सामाजिक मान्यता पनि वास्तै। उहाँले आफ्नो सिद्धान्त अनुसार बस्ने किनभने तिनले मानिसहरूको राय ख्याल गरेनन्। यस्तो व्यक्ति ठूलो willpower र विकेन्द्रहरु संग endowed छन्।
"लुगा मा भेट्नुहोस् - मन गर्न escorted।": अझै मान्छे को सबैभन्दा उपस्थिति निर्भर, कहिलेकाहीं चमक संक्षिप्त प्रशंसा र आदर तथापि, प्रसिद्ध भनाइ रूपमा दिन्छ
गरेको वास्तविक जीवन परिस्थिति कुरा गरौं। अहिलेसम्म वेटर वा bartender लोडर को उपस्थिति को व्यापारी वा schoolteacher को उपस्थिति देखि प्रतिष्ठित गर्नुपर्छ। सायद उत्तरार्द्ध बढि विस्तृत विवरण मा ध्यान।
रूप शिक्षक - सिक्ने प्रक्रियामा एक धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष। बेहोरा र भाषण, र व्यवहार मा र उपस्थिति मा: शिक्षक उदाहरण सबै एक हुनुपर्छ।
रूप शिक्षक भव्यता र परिष्कृत स्वाद फरक पर्छ। तर, यो न्याय पुनर्स्थापना र एक रो असमानता द्वारा perturbed विद्यार्थीको आवाज सुन्न गर्न, एक स्कूल वर्दी स्कूल सुविधाहरु सबै कामदारहरूलाई लागि स्थापित गर्न, र पनि अधिक स्वीकार्य हुनेछ (र वास्तवमा विद्यार्थीहरूलाई बेहोश अवस्थामा आफ्नो शिक्षकहरू, विद्यालय चार्टर अनुकरण पनि यो मौका उनलाई खोस्न)।
म कार्यस्थल मा extravagant स्वागत लाग्छ छैन। सायद, विद्यार्थी राम्रो सामाग्री सुन्न भन्दा एक शिक्षक को चिन्तन द्वारा अवशोषित गरिनेछ। एक ज्याकेट र ट्राउजर, उपयुक्त स्कूल स्तर संग सेतो वा अर्को रंग शर्ट को सही संयोजन: एक आधुनिक मोड संग शैली को आधिकारिक टिप्पणीहरू प्रतिबन्ध गर्न पर्याप्त। केश, पाठ्यक्रम, शिक्षक को विवेक, र अझै unmade सफा सुग्घर नभएको कर्ल र कपाल मा बेवस्ताई र लापरवाहीसंग शिक्षकको छाप दिन।
Strictness - एक स्कूल कर्मचारी को उपस्थिति को एक आवश्यक तत्व। त्यो जो सिक्ने लागि बच्चाहरु आदर र सामान्य मा पेशा गर्न गम्भीर मनोवृत्ति मा ल्याउँछ थियो।
म आधुनिक संसारको उपस्थिति को भूमिका सन्दर्भमा प्रश्न गर्न को लागि यस लेखमा थोडा कठिन खोलेको छ आशा।
Creoles - मिश्रित विवाह को सन्तानहरू छन्
Arkhip: नाम मान, वर्ण र भाग्य
Ascetic - एक स्वैच्छिक वा involuntary recluse?
पहेली शब्द "deflope"। यो के हो?
स्टेज पोशाक। यसको उद्देश्य, प्रयोग र सिलाई को स्कोप
सानो आकारको अपार्टमेन्ट को भित्री मा minimalism। भित्री कोठा अपार्टमेन्ट
Mammoth tusks। आफ्नो मूल्य र उत्पादन
संग्रहालय Gorodets मा "Gorodetsky केक": वर्णन, इतिहास, प्रदर्शनियों, रोचक तथ्य र समीक्षा
प्रगतिशील प्रशिक्षण Hyu Dzhekmana